﻿	Ntụ ọka ehi na kabeeji na-eji nwayọ nri (Video) - Ezi Ntụziaka
osikapa na ude nke ero ofe uzommeputa
ihe ị ga-eje ozi na skins nduku
ihe ị ga-eme na lobster fọdụrụnụ
appleton ugbo turkey ham esi nri ntụziaka
mkpụrụ mmanya mmanya pie sweet condensed milk
Ntụ ọka ehi na kabeeji na-eji nwayọ nri (Video)
Nke a Corned Beef na Kabeeji Jiri nwayọ Cooker uzommeputa achịkọta ihe ụtọ niile nke ehi ehi na-atọ ụtọ n’ime nri na-esiri onwe ya nri. Nri anụ ọka na kabeeji, karọt, na poteto esi nri zuru oke na ite ite na-eme nri na-enweghị isi.
Na-ekwu maka ọrịa strok nke ọdịmma na ụbọchị St. Patrick ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla n'afọ!
Ntụziaka kachasị mma maka anụ ehi ọka na kabeeji!
A na - ajụkarị m 'Gịnị bụ usoro kachasị mma maka ọka ehi na kabeeji?' na m ga-ekweta na m na-ele mmadụ anya n'ihu na nke a jiri nwayọ osi nri esi nri!
Nke a Crock ite Corned Beef & Kabeeji Ntụziaka a na-esi ya nke ọma na a 6QT onye na-esi nri ngwa ngwa (ma ọ bụ karịa) ka ọ na-eju afọ n'ezie. Tinye poteto gị tinye awa ole na ole n'ime usoro nri, nke mere na ha esi nri ruo ihe dịka awa 5-6, nke a ga-egbochi ha ịmị mushy. Tinye kabeeji awa 2 tupu ị na-eme atụmatụ ijere nri ahụ.
Ọ bụrụ na ị metụbeghị anụ ọka buru ibu, ọ dị mfe ịme ma ọ dị mkpa iburu n'uche, anụ ezi ọka (na beef brisket n'ozuzu ya) bụ nsị anụ siri ike ruo mgbe esiri ya nke ọma. Ọ bụrụ na o siri ike, ọ naghị esi nri ogologo oge, hapụ ya na ngwa ngwa nwayọ ma nye ya obere oge.
Tupu ị belata, ị ga-achọ mgbe niile ikwe ka anụ ehi gị na-ezu ike ka ọ zuo ike n'ihi na nke a bụ ihe nzuzo maka oke ịkpụ anụ. Ozugbo izu ike, gbubie ọka ime ka ọka bekee dị juicier, ndụdụ dị nro ma bụrụ ihe na-atọ ụtọ ..
Enwere ndụmọdụ ole na ole dị mkpa ịchọrọ ịma mgbe ị na-eme ihe ọ bụla brisket Ntụziaka (gụnyere nke a ite ite ọka beef uzommeputa).
Etu esi esi nri anu ọka na-eme nri
Obere & Naa: Brisket bụ anụ siri ike ịkpụ anụ ma nweta nsonazụ kachasị mma, ekwesiri iji ya sie nwayọ nwayọ ma dịkwa nwayọ. N'ime uzommeputa a, m na-eji onye na-esighi ike ngwa ngwa na m na-ejide n'aka iji ntọala dị ala.
Nye ya oge: Nke a na-alaghachi na 'nwayọ nwayọ'… Ntụziaka a na-akpọ maka awa 8-10 ma nke m na-ewekarịkarị nso na 10. Ọ bụrụ na anụ gị nwere ọka siri ike, enwere ezigbo ohere ọ naghị esi nri ogologo oge.
Zuo anụ gị: Dị ka ọ dị n'ọtụtụ anụ, hapụ ya ka ọ zuo ike maka nkeji ole na ole tupu ịkpụ.
Bee n'ofe ọka: Brisket nwere ogologo eriri fibrous n'ihi ya ọ dị ezigbo mkpa ịfefe ọka. N'ezie, nke a bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke nhazi a !!
Kedu Ngwa nri na-aga n'anụ ọka?
Anụ ọka bụ anụ nkịta anụla nke a gwọchara ma brined. Mgbe a na-ere ya, ọ na-abịarịworị ma ọ bụ tinye ya sizgee. Oge a gụnyere ngwa nri na-esi ísì ụtọ mara mma dịka allspice, peppercorns, mustard seed, coriander iji kpọọ ole na ole. Ọ bụrụ na anụ gị nwere ọka adịghị enwe ngwa nri ị nwere ike itinye ngaji abụọ spicestụtụ ngwa nri , obere ose na akwukwo akwukwo. Kechie ha n’ákwà mmiri ma tụba ha n’ime ngwa ngwa.
velveeta mac na chiiz nwere ham
Patrickbọchị St. Patrick bụ oge zuru oke iji nwee ọ recipeụ dị mfe iji nwayọ esi nri dị ka Corned Beef na Kabeeji. Iji ite ite na-eme ka nri a ghara ịrụ ọrụ!
Nke a Nri Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na emepụta a otu nke ụdị, ụtọ nri abalị na ezinụlọ gị ga-n'anya! Ebe ọ bụ na nri adịchaala, anyị na-ejikarị ya arụ ọrụ Nkeji 30 Nke abalị ma ọ bụ Easy Arụrụ n'ụlọ Buttermilk Biscuits na a dị mfe n'akụkụ salad.
Enwere m mmetụta ị chọrọ ime n'afọ a! Nri a dị mfe nke anụ ehi na kabeeji nwere nri zuru ezu n'otu, anụ anụ ọka, poteto, karọt na kabeeji.
Ọkacha mmasị ndị Irish
Nwa Atụrụ atụrụ (Irish Stew) - Ya mere ọgaranya na flavorful!
Etu esi esi esi anụ anụ ọka (Stove Top) - Kpochaa ụdị nke kachasị elu!
Achịcha Soda Irish - Ezigbo akụkụ, dị mma maka ofe na stews!
Ntuziaka Colcannon (Kabeeji na nduku) - The kacha nkasi obi nri!
Sanwichi Reuben m nwere mmasị na - Arụrụ n'ụlọ kacha mma!
5site naOgbe 714votu NyochaNtụziaka
Nri Anughi Ohia Na Akwukwo nri
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri8 awa Oge zuru ezu8 awa 10 Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeUgonna Onyeukwu Nri a na-egbu ahihia na kabeeji na-eji nri esi nri nke na-atọ ụtọ nke anụ ehi ọka n'ime nri na-esiri onwe ya nri. Na-ekwu maka ọrịa strok nke ọdịmma na ụbọchị St. Patrick ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla n'afọ!
▢1 ọka beef brisket 3-4 pound
▢3 mkpụmkpụ galiki
▢abụọ n'ọnụ mmiri doo
▢2 ½ - 3 iko mmiri
▢abụọ paụnd nduku peeled & quartered
▢abụọ nnukwu karọt gbanwere
▢1 obere isi nke kabeeji bee n'ime wedges
Bee yabasị n'ime nnukwu chunks ma tinye na ala nke onye na-esi nri ngwa ngwa 6 qt. Elu na anụ ehi na ọka sizda.
Wunye mmiri n’ime ngwa ngwa wee ruo mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ kpuchie anụ ehi ehi. Add garlic na n'ọnụ mmiri epupụta.
Esi nri na obere awa 8-10.
Mgbe awa atọ mbụ, tinye poteto na carrots na ngwa ngwa ngwa.
Awa abụọ tupu ị na-eje ozi, tinye kabeeji kabeeji na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Wepu ehi ehi site na onye na-esi nri ngwa ngwa ma hapụ ezumike 15 nkeji tupu ịkpụ. Ije Ozi na poteto, karọt na kabeeji.
Ozugbo esiri anụ ehi gị ga-adị nro (nke m na-esikarị nso na oge 10). Ngwaọrụ nwere ike ịdị iche, ma ọ bụrụ na anụ gị nwere ọka adịghị nro, ọ nwere ike ọ ga-esi nri karịa. Ọ dị mkpa ịkpụchasị beef ọka gị n'akụkụ ọka. Ihe oriri na-edozi ahụ bụ atụmatụ ma ga-adịgasị iche dabere na usoro esi esi nri na ụdị ihe eji eme ihe.
Calorisị:Ogbe 592,Carbohydrates:32g,Protein:39g,Abụba:3. 4g,Abụba Ajuju:10g,Cholesterol:Ogbe 122mg,Sodium:Ogbe 2817mg,Potassium:1653mg,Eriri:8g,Sugar:6g,Vitamin A:3545IU,Vitamin C:136.9mg,Calcium:135mg,Iron:9.5mg
Isiokwuọka ehi na kabeeji N'ezieNri abalị Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Megharịa Ntụziaka Cookware a
Pubdị Irish Pub Nachos
ihe-eri na cheese osisi
Oyi kpọnwụrụ Water Balloon Yad ịchọ mma!
Ntụziaka Hamburger a na-ahụkarị
CrockPot Nri ụtụtụ Casserole
Igwe umengwụ umengwụ Lasagna (Ravioli)
Ọkacha Amịrị Na-amasịkarị Gị
Pịa Strawberry Butter
Arụrụ Aka Kamel ọka
Achịcha Onye Ọzụzụ Atụrụ Lentil dị mfe (onye anaghị eri anụ)